I-Biography emfushane kaJames Joyce | Izincwadi Zamanje
Umlobi wase-Ireland uJames Joyce wazalwa ngo-1882 edolobheni laseRubmines eDublin. Imfundo yakhe wayenza esifubeni sekolishi lamaJesuit futhi kamuva waya ekolishi laseyunivesithi aphothula kulo Izilimi zesimanje.
UJoyce wahamba kakhulu eminyakeni yokuqala yempilo yakhe, ehlala emadolobheni ahlukahlukene nasemazweni afana naseDublin e-Ireland, eLondon eNgilandi, eZurich eSwitzerland nase Trieste e-Italy. Ngaphandle kokuthi ngokuhamba kwesikhathi udumo lwakhe lwalusemhlabeni wonke futhi namuhla uthathwa njengomunye wababhali bezenkolo kuzo zonke izincwadi, ngesikhathi sakhe, uJames wahlupheka ngokushicilela indalo yakhe ngakho-ke kwakudingeka asuse emfundisweni yolimi ukuze asinde.
Naphezu kobunzima bokuletha imisebenzi yakhe ekukhanyeni, esinye sezici ezingenakuphikwa zalo mbhali omkhulu ngesakhe nokuguquguquka ephethe ipeni ngesandla, ngoba uJoyce wayengumbhali wemisebenzi eminingi eyahlukene edlala cishe zonke izitayela zemibhalo uqobo. Futhi ukuthi umbhali odumile ungumbhali wemisebenzi yezindaba, izincwadi zezinkondlo, novelas ngisho namadrama, ngakho-ke ifa asishiyela lona ngenkathi eshona ngo-1941 lihlukile futhi libanzi.
Imininingwane engaphezulu - I-Ulysses: izindlela eziyinkulungwane zokuchaza iDublin
Isithombe - Ababhali Bezilimi ZaseSpanishi
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umlando kaJames Joyce